Dalka yar ee Qatar oo daba Fayday Manaafaqada iyo laba Wajiilaynta Maraykanka Xog Sir ahna banaanka keenay. – Xeernews24
Dalka yar ee Qatar oo daba Fayday Manaafaqada iyo laba Wajiilaynta Maraykanka Xog Sir ahna banaanka keenay.
12. Juni 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Dowladda yar ee Qatar ayaa martigelisay Ururka Taliban kadib markii ay sidaas ka codsatay dowladda Mareykanka, sida uu Al-Jazeera u xaqiijiyey wasiirka Arrimaha Dibadda dalka Qatar.
Mutlaq Al Qahtani ayaa sheegay in dowladaha Khaliijka ay marti geliyeen ururka Taliban ee ka dagaalamo dalka Afgaanistaan kadib markii ay sidaas ka codsatay dowladda Mareykanka.
“Dowladaha Khaliijka ayaa marti geliyey Taliban, waxayna aheyd codsi uu Mareykanka soo gudbiyey, waxayna kamid aheyd siyaasadda albaabada furan, si loo fududeeyo wadahalada Mareykanka iyo Taliban loona xaqiijiyo nabadgalyada” ayuu yidhi
“Qatar waxay fududeyneysay wadahalada u dhaxeeya Taliban iyo Mareykanka, Taliban iyo dowladda Afghanistan” ayuu sii raaciyey.
Xafiiska Talbian ee siyaasadda ayaa dalka Qatar laga furay sanadkii 2013, mana jirin ilaa xilligaas wax hadal ah oo kasoo yeedhay dalka Mareykanka kuna saabsan arrintaas.
Hadalka Al Qahtani ayaa imaanayo xilli Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu Qatar ku eedeeyey inay waligeed taageeri jirtay argagixisada ayna tahay mid taariikh dheer soo jirtay inkastoo ay Qatar inkirtay.
Madaxweynaha Mareykanka wax daliil ama caddeyn ah uma keenin eedeyntii uu u jeediyey dowladda Qatar oo aheyd inay waqti badan taageereysay argagixisada.
Hadalka kasoo yeedhay wasiirka Arrimaha Dibadda Qatar ayaa muujinayo laba wajiilanimada dowladda Mareykanka, waxayna Qatar ku eedeysaneysaa arrin ay iyada markii hore ka dalbatay oo aheyd inay furto wadahadal ku saabsan Taliban iyo Mareykanka.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/trump-saudi-1-180x135.jpg 135 180 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-06-12 23:01:452017-06-12 23:02:27Dalka yar ee Qatar oo daba Fayday Manaafaqada iyo laba Wajiilaynta Maraykanka Xog Sir ahna banaanka keenay.
Xildhibaan Ducaale Coofle oo Dawlada Djibouti Indha faraha ka Gashay. Ma Dhabba in Sacuudigu uu $80 Milyan usoo bandhigay Farmaajo & Jawaabtii...